एन्फा दिवस कि कालो दिवस ! :: सीताराम कोइराला :: Setopati
एन्फा दिवस कि कालो दिवस !
२०७५ वैशाख २२ गते अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को नेतृत्वमा कर्माछिरिङ शेर्पा निर्वाचित भएका थिए। परिवर्तनको नारा दिएर चुनावमा होमिएका शेर्पा अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा २३ वर्षपछि एन्फाको राजनीतिबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए।
एन्फा नेतृत्वमा आएको एक वर्ष नबित्दै शेर्पाले चुनावमा बाचा गरेका नारा बिर्सेको गणेश थापाविरुद्ध आन्दोलन गर्दा साथ दिएका सहकर्मीले आरोप लगाए।
आफू नेतृत्वमा आएको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा शेर्पाले वैशाख २२ लाई एन्फा डेको रुपमा मनाउने सुरुवात गरे। गत वर्ष भएको एन्फा डेमा उदयीमान खेलाडी, उत्कृष्ट रेफ्री, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेल्ने उत्कृष्ट फुटबल खेलाडी, उत्कष्ट महिला र पुरुष खेलाडी, स्पेशल अवार्ड, लाइभ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड नगदसहित प्रदान गरियो।
यो कार्यक्रममा शेर्पालाई आन्दोलनमा ठूलो साथ दिएका एन्फाका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नविन पाँडेले अनुपस्थित भए। कार्यक्रम भइरहदा अर्को एक होटलमा रहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै पाँडेले सांकेतिक रुपमा बहिष्कारको सन्देश दिएका थिए।
एन्फामा बढ्दै गएको विवाद गत माघमा छताछुल्ल भयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङले गत माघ २६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकमा विभिन्न विषयमा असहमति जनाउँदै चैत पहिलो साता एन्फामा सहमति पत्र दर्ता गराएका थिए। उनले कार्यसमितिको बैठकमै माइन्यूट बुकमा आफ्नो असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्न माग गरेका थिए। तर अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधारले लिखित असहमति पत्र लेख्न भन्दै माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न दिएका थिएनन्।
माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नदिएपछि उनले एन्फामा आफ्नो असहमति पत्र दर्ता गराएका थिए।
एन्फा अपारदर्शी रुपमा चलेको भन्दै विभिन्न ९ बुँदामा नेम्बाङले असहमति जनाए। नेम्बाङले एन्फाले ए डिभिजन लिगको खेल प्रशारण सम्बन्धी काममा निर्णय सामूहिक नेतृत्व, आर्थिक पारदर्शिता र प्रशासनिक पारदर्शिताको मर्म विपरित काम गरेको आरोप लगाए।
यस्तै रौतहटमा बन्न लागेको महिला फुटबल एकेडेमी बनाएर सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखे।
संस्थामा शेर्पापछि दोस्रो वरीयताका नेम्बाङले एन्फाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई ठाडो चुनौती दिएको भन्नु पक्कै पनि नेतृत्वका लागि शुभसंकेत होइन।
एन्फामा पछिल्लो समय कार्यान्वयन पहिल्यै गर्ने अनि पछि कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने परिपाटी बढ्दै गइरहेको उनको अर्को आरोप छ।
एन्फाले खेलाडीलाई स्वास्थ्य उपाचारका लागि खर्च नदिएको तर सदस्य तथा पदाधिकारीलाई स्वास्थ्य उपचारको नाममा पैसा बडेको भन्दै एन्फा नेतृत्वको चर्को विरोध भइरहेको छ। गत माघ २६ गतेको बैठकबाट एन्फाले प्रवक्ता किरण राईलाई ७५ हजार, सदस्य पूर्णमान चित्रकारलाई ५ लाख र महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई औषधि उपचार खर्च २ लख २८ हजार प्रदान गरिएकोमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
शेर्पा एन्फा नेतृत्वमा आएको सोमबार दुई वर्ष पूरा भएको छ। दुई वर्षमा आलोचना बढी र प्रशंसा कम पाएको एन्फाले २२ वैशाखमा भव्य रुपमा मनाउने लागेको भनिएको एन्फा डे रद्द गरेको छ। कोरोनाभाइरसका कारण एन्फा डे रद्द भएको हो।
'यो वर्ष हामीले उत्कृष्ट समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरेका थियौं, तर अहिलेको अवस्थाले गर्दा हामीले कार्यक्रम रद्द गर्न बाध्य भएका छौं,' अध्यक्ष शेर्पाले भनेका छन्।
शेर्पाले आजको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रुपमा सम्झिरहदा पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले भने नेपाली खेलाडीको निमित्त दुर्भाग्यको दिन भनेका छन्।
'जुन दिनदेखि ह्याप्पी एन्फा डे भन्न थालियो, त्यहि दिनदेखि खेलाडीहरुले पाउँदै आएका कार, अपाटमेन्टजस्ता पुरस्कारहरु हटाएर जम्मा ११ लाख रुपैयाँ दिएर खेलाडीलाई रूवाउने काम भयो। २० लाख भन्दा बढीको जाँड रक्सी खुवाएर पार्टी गर्ने दिनलाई ह्याप्पी एन्फा डे होइन कालो दिनको रुपमा मनाउनु पर्दछ,' थापाले भने।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २२, २०७७, ०७:४२:००